Home New • Brand You Academy
Brand Yourself for
Master Image, Branding and Personality Development.
Learn from our professional trainers. Create strategies for yourself and your company.
Communicate closely with Trainers & Fellow Participants
Join with us on Telegram Student Community
Khaing Zin Theint
Brand You Academy မှာ ~ Digital Branding ~ 31 Steps to Personality ~ Foundation on Personal Branding ~ Advanced Personal Branding Online Courses တွ တက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ videos တွက ကြည့်ရတာ အရမ်းမရှည် အရမ်းမနည်းဘဲ အဓိကအချက်တွေပါတာကို သဘောကျပါတယ်။ videos မှာ ဆရာမ ကိုယ်တိုင် ရှင်းပြတာက စာသင်သလိုမဟုတ်ဘဲ ဆွးနွေး အကြံဉာဏ်ပေးသလို တရင်းတနီးဖြစ်တာရယ် main points တွကို စာတန်းနဲ့ ပပေးထားတာပါလည်း မှတ်ရလွယ်ပါတယ်။ courses တွ တပိုင်းပြီး တပိုင်းအပြီးမှာ assignment လးတွေပါတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိကို ထင်ဟပ်ကြည့်နိုင်ပြီး ပင်ယူသင့်တာတွေ သိရလို့ knowledge တွတိုးစေပြီး branding အပိုင်းမှာလည်း တိုးတက်လာပါတယ်။ personal lifestyle အတွက်လည်း အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်။ Khaing Zin Theint
Hnaung Hnaung Naing
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝေးခဲ့တာ ၁၅နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ အခုစပြီးအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ ကျမမှာအခက်ခဲ အများကြီးတွေ့လာရပါတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်မှာ ကိုယ်ဟာ brand ဖစ်နေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အပြောအဆိုအနေအထိုင်တွေကိုသိခွင့်ရလာခဲ့တယ်။communication skill ဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးလည်း သိလာခဲ့တယ်။ကျမလို introvert တယောက်အတွက်သင်ယူစရာအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။personal branding တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အထောက်အကူအများကြီးရခဲ့တဲ့အတွက် ဆရာမ ထက်ရည်နဲ့. ဆရာဖြိုးသီဟ ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။
Thet Htar Aung GBV Response Assistant
ဒီသင်တန်းလေးက အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နားလည်ပြီး လှပထက်မြက်တဲ့ အလုပ်နဲ့ဘဝကိုညီမျှအောင်စွမ်းဆောင်ဖို့ အကြောင်းအရာလေးတွေ၊ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့၊ နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်ပီးအသုံးချတတ်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မှုတွေအပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိပညာလေးတွေ မျှဝေပေးလို့ အရမ်းကိုအကျိုးရှိတဲ့ သင်တန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်
Ei Phu MyintAssistant Lecturer (SITE)
ဆရာနှင့် ဆရာမတို့ရဲ့ သင်ကြားမှုပုံစံကောင်းမွန်မှုနှင့် အတူ၊ လ့လာမှတ်သားသင့်သော သင်ခန်းစာများကို သင်ယူလိုက်ရတဲ့အတွက် ဒီ "31Steps to Personality" သင်တန်းတက်ရောက်လိုက်ရခြင်းကို ဝမ်းသာကျေနပ်မိပါတယ်။ သင်ခန်းစာများကို မှတ်သား၊ လိုက်နာ၊ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပိုမိုတိုးတက်လာပြီး ပျော်ရွှင်အောင်မြင်သော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ မျှာ်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ System ပိုင်းမှာရော ဝန်ဆောင်မှုမှာရော video တွ အပိုင်းမှာပါ အကုန် အဆင်ပြေပါတယ်ရှင့်
Wai Wai LwinPrimary Assistant Teacher
Online Class တစ်ခါမှမတတ်ဘူးလို့ excited ဖြစ်ရပါတယ်၊၊နားထောင်ပြီးမေ့မှာစိုးလို့ Note တစ်အုပ်ထုတ်ပါတယ်၊၊အရင်ကထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုးတက်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်၊၊ တစ်နေ့တစ်ခုပဲ လေ့လာဖြစ်ပါတယ်၊အရင်ကထက် Confident တွေရှိလာပြီလို့ခံစားရပါတယ်၊၊ ဒီသင်တန်းတတ်ရတာ ဗဟုသုတတွေအများကြီးရပါတယ်၊၊ဆရာနှင့်ဆရာမ ကျေးဇူးပါရှင့်။
ကျွန်မကလေ့လာသင်ယူမှုကိုကြိုက်နှစ်သက်သူပါ။video အရှည်ကြီးတွေကိုကြည့်ဖို့ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်ထဲကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက်ကျတော့အချိန်မပေးနိုင်ပြန်ဘူး။ ဒီသင်တန်းကvideoတွေက အရမ်းမရှည်တာမို့ကြည့်ရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်မအတွက်Topicတစ်ခုစီတိုင်းက knowledge တစ်ခုစီရခဲ့ပါတယ်။ ခါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်မှာအားရုံစူစိုက်မှုအပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့၊ကိုယ်ရဲ့ဝန်းထမ်းတွေနဲ့ customersတွေရဲ့ပြောစကားတွေကို နားထောင်တတ်ခြင်းနဲ့နားထောင်တတ်လာတယ်။
ကျွန်မရဲ့ အချိန်တွေကို အရင်ကထက်ပိုပြီးစနစ်တကျအသုံးချနိုင်လာတယ်၊ ဘဝမှာ ဘယ်အရာကအဓိက၊ ဘယ်အရာကသာမညဆိုတာကို ပိုပြီးခွဲခြားနိုင်လာတယ်။ ကိုယ့်အတွက်မလိုအပ်ပဲထမ်းထားမိနေတဲ့ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေဟာဘာလဲ ကိုယ်ဟာဘယ်လိုအရာတွေကိုအလေးအနက်ထားရမလဲဆိုတာတွေကို သိမြင်လာခဲ့တယ် သင်တန်းရဲ့ System ပိုင်း ၊ ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းနဲ့ Video ပိုင်းတွေက အကုန်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင့်။
Saung Thinzar Zaw Pharmacist ( ZAW Pharmacy )
Planning ကို သချာ လုပ်တတ်လာတယ်။ လူတစ်ယောက်အတွက် Time management လိုအပ်တာသိလာတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တတ်လာတယ်။ပြဿနာတစ်ခုကို အရင်ကချက်ချင်း မဖြေရှင်းနိုင်ပေမယ့် သင်တန်းတက်ပြီးနောက်ပိုင်း ချက်ချင်း မဆိုင်းမတွ အကျိုးအကြောင်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်လာတယ်။(အဲလိုလုပ်နိုင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောတွေကျနေတာ) မိမိကိုယ်တိုင်အရင်ကနဲ့စာရင် သိသိသာသာပြောင်းလဲလာပါတယ်။ Brand you Academy Team ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းကတော့ ဘာမှ အကြံပေးစရာ မလိုအောင် ကောင်းပါတယ်။ Video ကအချိန်တိုတိုနဲ့ ငြီးငွေ့ မသွားစေလို့ အဆင်ပြေတယ်။
Win Ei PhyuGeneral Manager (Silver Lotus Co., Ltd)
နည်းပညာပိုင်း အနေနဲ့ Facebook group မဟုတ်ဘဲ website က ကြည့်ရတာဖြစ်လို့ Facebook အသုံးမပြုသူ သို့မဟုတ် အသုံးမပြုနေတဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာပိုင်းကတော့ သင်တန်းကြေးထက် တကယ်ကို ပိုပိုသာသာ စတနာအပြည့်ပါလှတာ သိသာပါတယ်။ ကျွန်မက ခဏလေး motivate ဖစ်သွားပြီးရင် ရရှည်မခံတဲ့ talk တွ lecture တွ မကြိုက်တတ်သူမို့ ဆရာဖြိုးနဲ့ မထက်ရည်ရဲ့ ခုလိုမျိုး balance ဖစ်အောင် အကုန်ထည့်ပေးထားတဲ့ ဒီလို သင်တန်းမျိုးကို သိပ်သဘောကျပါတယ်။ Health အပိုင်းဆိုလည်း သိသင့်သိထိုက်တာ အားလုံး ပာပြပေးထားတာမို့ အရမ်းပဲ ကျးဇူးတင်မိပါတယ်။ အမျိုးသမီးကြီးငယ်မရွေး တက်သင့်တာမို့ ကိုယ်တိုင်လည်း တ်နဲ့ recommend လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Mindful Decluttering Course လးက ညီမအတွက်တော့ expect လုပ်ထားတာထက် အများကြီး အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ညီမ မသိသေးတဲ့ .. ညီမအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ information တွအများကြီး သင်ယူခဲ့ရတာရယ် အရင်က အသိအဖြစ်သာ ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာ ရှိနေသေးတဲ့ အရာတွေကို တကယ် လက်တွေ့မှာ ဘယ်လို အသုံးချမလဲ ၊ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လို ပိုကောင်းအောင် ကျင့်သုံး မလဲဆိုတာလေးတွေကို ငြီးငွေ့စရာမဟုတ်ပဲ နေ့ စဉ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လုပ်လို့ရမယ့် အကျင့်လေးတွေကို Step-by-step ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြသွားတာလေးတွေပါ ။ Mindful Decluttering Course လးကို တက်မယ့်သူတွေကိုတော့ ညီမအနေနဲ့ အကြံပေးချင်တာက Empty Cup လးနဲ့ လာဖို့ပါ။
ဒီ Mindful Decluttering Course လးက ညီမအတွက်တော့ expect လုပ်ထားတာထက် အများကြီး အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ညီမ မသိသေးတဲ့ .. ညီမအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ information တွအများကြီး သင်ယူခဲ့ရတာရယ် အရင်က အသိအဖြစ်သာ ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာ ရှိနေသေးတဲ့ အရာတွေကို တကယ် လက်တွေ့မှာ ဘယ်လို အသုံးချမလဲ ၊ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လို ပိုကောင်းအောင် ကျင့်သုံး မလဲဆိုတာလေးတွေကို ငြီးငွေ့စရာမဟုတ်ပဲ န့စဉ် ပါ့ပေါ့ပါးပါး လုပ်လိုရမယ့် အကျင့်လေးတွေကို Step-by-step ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပာပြသွားတာလေးတွေပါ ။ Mindful Decluttering Course လးကို တက်မယ့်သူတွေကိုတော့ ညီမအနေနဲ့ အကြံပေးချင်တာက Empty Cup လးနဲ့ လာဖို့ပါ။
Page 1 - Brand You Academy Users' Guide
Page2- Brand You Academy Users' Guide
Page3- Brand You Academy Users' Guide
Page4- Brand You Academy Users' Guide
Page5- Brand You Academy Users' Guide
Page 6- Brand You Academy Users' Guide